Kharashka Imtixaanka Websaydhka | Martech Zone
Monetate waxay soo bandhigtay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan waxa laga fekerayo iyo sida loo caddeeyo kharashka aaladda baaritaanka websaydhka. Waa muuqaal dhammaystiran oo ku saabsan caqabadaha, kharashyada, saameynta, kharashyada tooska ah, kharashyada aan tooska ahayn iyo fursadaha ay tijaabinta websaydhku bixin karto.
Qiyaasta maaliyadeed ee dhow ee qarniga ee loo yaqaan Wadarta Qiimaha Lahaanshaha (TC)) ayaa kaa caawin karta go'aaminta kharashyada tooska iyo kuwa aan tooska ahayn ee iibsashada. Waxaa korsaday Gartner si uu uga caawiyo cabirka qiimaha dhabta ah ee softiweerka ama maalgashiga qalabka waqtiga, shirkaduhu waa inay tixgeliyaan TCO markay go'aansanayaan aaladda tijaabada websaydhka ay isticmaali karto
Waxaan si gaar ah u qadarinayaa qadka hoose: Qalab wuxuu noqon karaa mid jaban, ama xitaa bilaash ah, laakiin waqtigaaga iyo dadkaagu ma ahan. Waxaan aragnaa dad badan oo aan maalgashi ku sameyn doonin qalabka… laakiin aan waligood ka faa'iideysan kuwa xorta ah ee ay tahay inay saameyn ku yeeshaan.
Tags: kharashka baaritaanka websaydhkamonetateku soo noqo maalgashigaROIimtixaankawadarta qiimaha lahaanshahaimtixaanka bogga
SEO wuu dhintay
Apr 4, 2012 at 2: 12 PM
Douglas, sida had iyo jeer… waad ku mahadsan tahay dhajinta! La soco faahfaahintayada xigta ee Khibradda Macaamilka. Waa inuu noqdaa mid wanaagsan!